» XOG: Maxaa kasoo baxay kulan Xasaasi ah oo dhexmaray Farmaajo & Xubno matalayay B/Mudulood…Badweyntimes.com
XOG: Maxaa kasoo baxay kulan Xasaasi ah oo dhexmaray Farmaajo & Xubno matalayay B/Mudulood…
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa kulan Saxaafada loo diiday oo dhexmaray M/weynaha Cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Xildhibaanada u dhashay Beesha mudulood waxaana kulankaan diirada lagu saaray Kursiga R/wasaaraha Cusub.
Xubnaha ka socday Beesha Mudulood ee kulanka la qaadatay Farmaajo ayaa gaarayay 16 xubnood, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Madaxweyne Ku Xigeenka Hirshabelle kaas oo ka dhacay Hoteelka uu degan yahay Madaxweyne Farmaajo.
Dhinacyada ayaa isku raacay Qorsho yaal aad u badan sida xog hoose aanu ku helnay laakiin Madaxweyne Farmaajo ayaa u sheegay xubnaha Beesha Mudulood in uusan weli xilka la wareegin balse marka uu xilka la wareegi ay bilaabaneyso xulashada Ra’isul wasaaraha.
Mid ka mid ah Xubnihii ka qeyb galay Kulanka Beesha Mudulood iyo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ayaa si hoose inoogu xaqiijiyay in kulamo kale oo aan caadi aheyn lagu balamay kuwaas oo sidoo kale looga hadli doono Maqaamka Gobolka Banaadir.
« Warbixinta Ka HoreysayDEG DEG: S/land oo si rasmi ah u aqbashay in Saldhig Millatari Imaaraadka ka dhistaan Berbera.
Warbixinta Xigto »AKHRI LIISKA MAGACYADA: 14-qof oo u sharaxan Xilka R/wasaaraha Cusub ee Somalia…